I-Horoscope ngo-September 2017 yabesifazane besuka ku-Tamara Globa
I-Dev ilindele uSepthemba ozolile, enganelisekile ngemicimbi neziqephu ezikhanyayo. Abamele abaningi besibonakaliso bazoya emsebenzini bekhanda. I-Mars izobabeka ngokuzimisela nokubekezela. Bayawuthatha lolu daba ngentshiseko futhi ngesikhathi esifushane bazothola phambili umsebenzi omkhulu. Imisebenzi yokuqala kanye nemisebenzi esebenzayo izothela izithelo ngendlela yokukhuthaza noma ukukhushulwa.
Ngothando, iNdodana izoqondiswa yizizathu, ikhetha indlela yokuziphendulela ebuhlotsheni. Kungaba nomuzwa naye. Zama ukugwema izitatimende ezinzima, ukuze ungalimazi ukuziqhenya kwalowo muntu. Emshadweni, izingxabano ngesisekelo somhawu zingenzeka. Ingxenye yesibili kaSeptemba iyoba ukuhlolwa kwamandla wena nomlingani wakho.
I-Horoscope ngo-September 2017 yabesifazane-Dev kusukela ku-Angela Pearl
Ilanga lizokwenza i Dev ibe namandla futhi isifiso sokushintsha impilo yakhe. Abesifazane abaningi bazovula amehlo abo eqinisweni futhi bayomangala, njengoba bengakaqapheli lokho okungekho okuhlangene nabo. USepthemba yisikhathi esifanele sokuqeda ubuntu obunamaphutha, ulungise ukuziphatha kwakho, ushintshe imisebenzi futhi ulahle imikhuba emibi. Ngemva kokubhekana nezinkinga eziyinhloko, abesifazane baseVirgo bangenza izinhlelo ngokuzayo ngokuzayo. Maduzane bazodinga "ikhanda elibandayo", ngoba ekupheleni kwenyanga kubalulekile ukwenza ukhetho olunzima. Imibuzo mayelana nenhlalakahle yomuntu ayikwazi ukunqunywa ngemizwelo noma ngokusheshisa. Izinkanyezi zeluleka ukuba zibeke phambili ngokufanele manje, ukuze ungazisoli esikhathini esizayo.
Abayeni abakhulu kunazo zonke ngesikhathi sokuzalwa kwezinkanyezi
Ukwelashwa ngokwemithi kwe-eczema
Endleleni eya emzimbeni omncane, noma Indlela yokulahlekelwa isisindo ngo-5 kg ​​ezinsukwini ezintathu, ngesonto, ngenyanga
Ezempilo: izifo zolimi
I-manty: iresiphi, enandi
Ingulube nge ushizi nesipinashi
Isaladi "Fusion" ngamagilebhisi, amapheya kanye neparmesan
Isipinashi, i-asparagusi - izakhiwo eziwusizo